Trading Myanmar Blog | Myanmar Advertising Agency | Ad Portal Blog -
မလိုလားအပ်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေမဖြစ်ရလေအောင် ?
Min Thuta | Knowledge | February 15, 2021
ဒီအချိန်ကာလမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အခြေအနေများကြောင့် စီးပွားရေး၊လူမှုရေး၊ကျန်းမာရေး ဘက်ပေါင်းစုံကနေပြီး အကြောက်တရား၊ဝမ်းနည်းမှု၊စိုးရိမ်ကြောင့်ကျမှု စတဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုဒဏ်များကိုအနည်းနဲ့အများတော့ခံစားနေကြရပါတယ်။အဲ့အတွက်
ဆောင်းရာသီမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် ဘယ်လိုနေမလဲ?
Min Thuta | Health | February 12, 2021
အခုလို နေ့တာတိုပြီး ညတာရှည်တဲ့ ဆောင်းရာသီ အချိန်မျိုးမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ကိုက်ညီအောင်နေနိုင်ဖို့ အချက်တချို့ကို ဖော်ပြလိုက်ပါမယ်…
Min Thuta | Knowledge | February 5, 2021
တစ်ခါတစ်ရံမှာမိမိရဲ့ စီးပွားရေး ပညာရေး စတာတွေအတွက် ကြိုးစားဖို့စိတ်ပျက်အားလျော့နေတဲ့အခါ မိမိကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးပြီးအကောင်းဆုံးကြိုးစားဖို့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေရှိသင့်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကပ်ရောဂါကာလမှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပါဂရုစိုက်ဖို့လိုတာမို့ အခုဖော်ပြမဲ့နည်းလမ်းတွေထဲက အနည်းဆုံးတစ်ချက်တော့ သင့်အတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။
အိမ်ထဲမှာ အကျိုးရှိအောင် ဘလိုနေကြမလဲ?
Min Thuta | Knowledge | February 2, 2021
လက်တလော အချိန်မှာ မိတ်ဆွေတို့ အနေနဲ့ အိမ်ထဲမှာ လုံလုံခြုံခြုံနေကြတာ အကောင်းဆုံးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေတို့အတွက် အိမ်ထဲမှာ အကျိုးရှိဘလိုနေမလဲဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာ အချို့ကို ဖော်ပြပေးသွားချင်ပါတယ်…
Min Thuta | Food, Health | January 19, 2021
သစ်သီးတွေထဲမှာ ပန်းသီးဆိုရင် လူတိုင်းနီးပါး သိကြပါတယ်။ ပန်းသီးကိုစားသာစားနေကြပြီး ပန်းသီးစားရင် ဘာကောင်းကျိုးတွေ ရရှိလာမယ်ဆိုတာကို တော့လူတိုင်းနီးပါး သိကြမယ် မထင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ပန်းသီးစားရင် ဘာကောင်းကျိုးတွေရှိလဲဆိုတာကို ဝေမျှပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်…
Min Thuta | Food, Health | October 7, 2020
Detox water ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်တွင်းကအဆိပ်အတောက်တွေကိုထုတ်ပေးပြီး အဆီလဲကျ အသားအရည်လဲလှစေရန်သောက်သုံးသင့်တဲ့ အရည်ပါ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိပဲ သဘာဝနည်းအတိုင်းအဆီကျလှပစေရန်လည်းသောက်သုံးလို့ရပါတယ်။အသားအရည်ကိုစိုပြေလှပစေပြီး အူလမ်းကြောင်းကိုလည်းသန့်စင်စေပါတယ်။
All times are GMT 6.5. The time now is 10:24 am.